Ushicilelo lweLinvas | Igalari ye-ROYI yobugcisa
Ngesiqinisekiso sokwaneliseka se-100% kunye nokugcina okukhuselekileyo kwi-Intanethi, ngoku ungathenga iiprinta zeCanvas ezisemgangathweni kunye neefenitshala ngokuzithemba.
Iprint zethu zelaphu zenziwe ngetekhnoloji yakutshanje yoshicilelo lwedijithali ekhuselekile kwindalo kunye nevumba. Inqanaba lokugcina ii-inki esizisebenzisayo livelisa utshintsho olubukhali noludlamkileyo kwindawo yomxube womqhaphu okomeleleyo onokumelana kwakhona.
Amagcisa okwaziyo aya kukuxwayisa kude nabashicileli be-laser kwaye bakukhokele kwimveliso ye-inkjet. Njengomgaqo oqhelekileyo wesithupha, i-Epson, i-HP kunye neRoland zezona ziphambili ziphikisanayo. Nangona kunjalo, naphakathi kwezi brand kunye noomatshini babo, kukho umahluko.
Zonke izinto ezishicilelweyo zelaphu ziyolulwa kwaye zikulungele ukuxhonywa zisebenzisa indawo ezinokugcinwa kuyo ngokuzinzileyo, kunye nemithi ekhuselekileyo yokusingqongileyo kunye nezinto ezenziwe ngomthi ezimalunga ne-1.5 ye-intshi (3.5 cm) ubukhulu.
Ukuba isebenzisa idayi esekwe emanzini, kukho ithuba elihle lokuba umfanekiso wakho uyakufumana utshintsho ongasayi kuluxabisa. Ngomsebenzi wakho wobugcisa, uhlawula ukutyala imali kwiidayi ezisekwe kumbala ezingangeni manzi. Uninzi lwezi mveliso alutshabalali ngokuchazwa kwe-UV, nto leyo ibalulekileyo xa ufuna ukuba ubugcisa bakho buphele kwiminyaka elishumi okanye kwinkulungwane.
Jika iifoto zakho ukuba zenziwe ngelaphu ngeRoyi Art.
Iifoto zethu kwilaphu zilungele ukuhombisa ikhaya lakho okanye iofisi, kwaye zigqibelele njengezipho zeefoto.
Nxibelelana nathi namhlanje kwaye enye yeengcali zethu iya kwabelwa iakhawunti yakho kwaye inxibelelane nawe kungekudala.
Ilungele ukukunceda ngawo nawuphi na umbuzo okanye isicelo.
Abstract Oli Ukupeyinta , Contemporary Oli Ukupeyinta , Oli Umzobo , Akahlali Oli Ukupeyinta , neeBhari lokukhwelisa , Ukupeyinta On Isinikezeli-Oli , i- Zonke Products